Buug-gacmeedka Ardayga iyo Foomka - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Buug-gacmeedka ardayga iyo Foomka
Ku guuleysiga Barnaamijka Kuleejka Hore waa dadaal iskaashi oo u dhexeeya la taliyeyaasha Summit, ardayga, iyo nidaamka taageerada ardayga ee guriga.
Marka la aqbalo Barnaamijka Kuleejka Hore, ardayda iyo ugu yaraan hal waalid ayaa looga baahan yahay inay kaqeyb galaan Jihaynta Ardayda Cusub lataliyaha ardayga Summit si ay ugala hadlaan xuduudaha iyo waxyaabaha laga filayo barnaamijka. Ardayda Chemeketa way heli karaan Buug-gacmeedka ardayda ee Chemeketa halkan.
Foomka Buug-gacmeedka Ardayga
Shuruudaha Dibloomada ee Oregon
Codso Barnaamijka Kulliyada Hore adigoo gujinaya batoonka 'Codso' halkan, ama meel kale oo bartaan ah.
Codsadayaasha u qalma waa inay ku socdaan jidkii ay ku qalin jebin lahaayeen oo ay ku buuxin lahaayeen shuruudaha dhibcaha Summit Summit. Guji kambuyuutarka xiisaha loo qabo waqtiga kama dambaysta ah ee codsiyada.
Codsadeyaasha ka yar da'da 16, fadlan la xiriir diiwaan-hayaha si dhakhso leh waqtiyada kama dambeysta ee arjiga, tilmaamaha muhiimka ah.
Mar alla markii la helo arjigaaga, diiwaan-hayahayagu wuxuu kula soo xiriiri doonaa 2-3 maalmood oo shaqo gudahood isagoo ku siinaya tilmaamo sax ah xerada aad jeceshahay inaad ka soo qayb gasho. Ma aragtid xerada aad xiisaynayso? Nala soo xiriir!